Pinda Instagram Pasina Verification Code ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
January 28, 2019 0 mashoko 11179
Nhamba dzekusimbisa dzinogona kuve musoro kwauri. Kubva, zviri kuda kuziva kuti iri idambudziko dzakapararira mumashandisirwo akasiyana. Uye ndeiya yakakurumbira social network Instagram, ine iyi mhando yedambudziko rakabata vazhinji vashandisi, avo vanoona kuti iyo account yavo yakavharwa vasina kugona kuita chero chinhu. Asi zvakanaka pane nzira mbiri dziri nyore Kugadzirisa mamiriro ako. Yokutanga kupinda Instagram isina kodhi yekodhi uye yechipiri ndeyekumanikidza kusvika kweiyo kodhi. Panguva mbiri idzi mhedzisiro yakafanana. Asi zvakakoshawo kuti iwe uzive izvozvo Nhamba dzekusimbisa hadzina kushata dzose.
Chii chinonzi kodhi yekodhi?
Makodhi okusimbisa ari nzira dzekuchengetedza ayo anoshandisa email uye social media mapuratifomu, kuburikidza SMS nokuti batanidza account yako nefoni yako nhamba. Nenzira iyi, kana mumwe munhu achida kuwana maakaunti ako, mukuwedzera kune password yako (kana iwe uchinge waiwana) unofanirwa kuve nefoni yako parutivi, zvikasadaro haukwanisi kuvawana. Asi dzimwe nguva izvi makodhi ekuzivisa, ivo vanova chipingamupinyi chekuva newe Instagram kana chero imwe social network.
Sei paine matambudziko nemakodhi echiratidzo muIsagraph?
Zvikonzero zveizvi kuti zviitike zvinogona kunge zvichikonzerwa neyako kuchengetedzwa kwemagetsi yepuratifomu ya Instagram. Izvo dzimwe nguva zvinobatanidza yako email neiyo ye account iripo kana kuri kuendesa zvakare ruzivo rwawawedzera. Zvakare uye, dambudziko rinogona kunge rakazvigadzira iwe pachako, kutanga nenzira isiriyo nhamba yako yefoni. Zvadaro, iwe unenge uchitsvaga nzira yekupinda mu Instagram pasina kodhi yekodhi. Kune ese maviri mhinduro mhinduro dzakafanana.
Izvo zvakakodzera kuti iwe uzive, iyo Instagram ropafadzo yekusimbiswa neemail apo iyo chiitiko chinofungidzirwa uye dzimwe nguva wotumira makodhi ekuzivisa Kuti pamwe havasvike. Kugadzirisa dambudziko iri uteedzere aya matipi.
Ziva kuti huwandu hwawakanyora hwakarurama, kana zvirizvo, ita shuwa kuti rwuri kushanda here kuti ugone kugamuchira kodhi yekuzivisa. Kana izvi zvisingashande. edza imwe nhamba yaunayo Kune izvi, iwe unofanirwa kuchinja iyo nhamba iwe unayo mune yako Instagram account. Zvinokurudzirwa kuve yako account yakavhurwa kubva runhare uye PC neiyi nzira.
Tarisa iyo spam folda SMS, zvinogona kuti kodhi iripo. Kana zvisiri, edza kushandisa iyo backup kodhi yakagashirwa when Ini ndinogadzira iyo Instagram account, iyo iwe yauchawana mune yako yekugadziriswa. Kana izvi zvichishandira iwe, unogona Enter Instagram Hapana kodhi yekusimbisa.
Dzima chishandiso uye chinja nzvimbo kwauri. Dambudziko ringave iri kudzoreredza chiratidzo.
Kana pasina chimwe chezviri pamusoro chashanda, edza kudzidzisa Instagram kubva kunzvimbo yekubatsira, kuti vakupe mhinduro.
Asi kana iwe uchida kuzvigadzirisa nezvamunogona Wobva waedza sarudzo inotevera.
Matanho ekugamuchira iyo kodhi yekodhi
Mune ino kesi unofanirwa kushandisa peji rewebhu kugamuchira iwo meseji SMS, kudana Gamuchira SMS Online. Izvo, zvizere yemahara uye haidi kunyoreswa. Kana achipinda Instagram pasina kodhi yekodhi haisiyo mhinduro. Maitiro aya achakubatsira, kutevera matanho aya.
Chinhu chekutanga kupinda muwebhu ye Gamuchira SMS Online. Kamwe mukati, iwe uchaona rondedzero ye nhamba dzinobva munyika dzakasiyana uye zvinotevera, iwo mameseji akagamuchirwa mumaawa ekupedzisira e24. Zvino, pinda nhare mbozha ine mamwe mameseji. Iyo network inokurudzira kuti iwe usarudze huwandu hune mashoma mameseji, asi hwakashanda nevaya vane zvimwe. Kana zvikasashanda iwe. edza imwe nhamba yenhare, sezvo inogona kudhakwa kusvikira peji isati yavandudzwa.
Mushure mekusarudza, enda kune yekugamuchira meseji peji, kumusoro, iwe uchaona nhamba yefoni. Kopa kusanganisira chiratidzo "+"Paunenge waita izvi, zviise muhwindo zvinokuratidza Instagram uye tinya "Tumira".
Kana nhamba yefoni yatumirwa, Intagram ichaenderera kune kukutumira kodhi yekuzivisa. Iwe unofanirwa kudzokera kune iyo yekugamuchira mapeji peji uye kuigadzirisa.
Iine peji yakagadziriswa iwe unogona kuona patafura pazasi, mameseji ekupedzisira akatambirwa. Chinhu chinotevera iwe chaunoita ikopa kodhi yekuzivisa iyo Instagram ichave yatumira iwe, iyo yauchawana mune ikholomu mashoko. Iyo meseji inofanira kunge iri pakati pekutanga. Saizvozvo, simbisa kuti iyo nhamba yechikamu Kubva panhamba be 69988.
Kuti upedze kuita uku, isa pasiti iyo iwe yawakuteedzera mune yakapfuura nhanho, pane iyo peji iyo Instagram inokumbira. Kana wapedza, iwe unenge uine yako Verified Instagram account uye iwe uchave wakakwanisa kuishandisa iyo pasina dambudziko.
Iwe unogona zvakare kufarira Best lyrics for Instagram.
1 Chii chinonzi kodhi yekodhi?
2 Sei paine matambudziko nemakodhi echiratidzo muIsagraph?
3 Pinda ku Instagram pasina kodhi yekodhi
4 Matanho ekugamuchira iyo kodhi yekodhi
4.4 Kopa kodhi
4.5 Namatira kodhi
Download Instagram Nhau
Ita nzvimbo yako pa Instagram